Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Airlines » Nnukwu ụgbọ elu dị mma ugbu a na A220-300
Airlines • Aviation • Na-agbasa News Travel • News • Technology • Mmelite nke Njem njem • Akụkọ Mgbasa Ozi Njem • Akwụkwọ akụkọ USA
Breeze Airways, bụ ụgbọ elu America nke nọ na Cottonwood Heights, Utah.
David Neeleman, onye bụbu onye hibere Morris Air, WestJet, JetBlue na Azul Linhas Aereas guzobere ụgbọ elu ahụ.
Breeze Airways ekpughere nke ọhụrụ ya A220-300 akwụkwọ ebe ọ na -ekwenye na o rutela nkwekọrịta ịzụta na Airbus maka ụgbọ elu 20 ọzọ.
Iwu a akọwabeghị na mbụ maka 20 na-eweta akwụkwọ mkpokọta Breeze na 80 A220-300s, nke izizi ga-ebuga na Q4 2021.
Emechara ọrụ agba ọhụrụ nke ụgbọ elu ahụ na ụlọ ọrụ Airbus dị na Mobile, Alabama, nke ga-ebuga ihe dị ka otu A220 kwa ọnwa na Breeze n'ime afọ isii na ọkara na-esote.
Breeze Airways, ụgbọ elu mpaghara mpaghara United States kwuru banyere ụlọ ọrụ ahụ: “Anyị bụ ndị otu ụgbọ elu, ile ọbịa, na teknụzụ ndị kwenyere na ife efe bụ nnukwu ohere na ohere n'ụwa. Na, anyị kwenyere na ọ kwesịrị ịbụ nnweta na ezigbo ọmarịcha ahụmịhe maka mmadụ niile. ”
“Ọnụ, anyị kere Breeze Airways ™ - teknụzụ ụgbọ elu ọhụrụ jikọtara obiọma. Breeze na -enye ọrụ anaghị akwụsị akwụsị n'etiti ụzọ echekwara echekwabara n'ofe US na ọnụ ego dị ọnụ ala.
“Site na ntinye akwụkwọ enweghị nsogbu, enweghị mgbanwe ma ọ bụ ụgwọ kagbuo yana atụmatụ ụgbọ elu ahaziri iche nke enyere site na ngwa mara mma ma dị mfe, Breeze na -eme ka ọ dị mfe ịzụta na mfe ofufe. Nnọọ na Breeze, Ụgbọ elu na ọnụ ahịa ezigbo Nice ”.”
Ndị ọrụ ụgbọ elu ahụ na -ezube iji ụgbọ elu Airbus malite ụgbọ elu na nkeji nke abụọ nke 2022.
Obodo ikuku Breeze
Ọdịmma dị elu nke A220 ga -akwado ebumnuche azụmahịa nke ụgbọ elu ọhụrụ ahụ iji nye ahụmịhe njem dị mma, yana ọnụ ala dị ala yana mgbanwe dị elu. A na -atụ anya na Breeze ga -enye ọrụ na -akwụsịghị akwụsị n'etiti ụzọ a na -edozighi echekwa gafee US na ọnụ ego dị ọnụ ala.
Breeze bidoro ịrụ ọrụ ụgbọ elu na Mee 2021. A220 mbụ a bụ ụgbọ elu ọhụrụ nke ụgbọ elu ahụ ga -arụ ọrụ.
A220 bụ naanị ebumnuche ụgbọ elu emebere maka ahịa oche 100-150 ma na-achịkọta teknụzụ ikuku kacha ọhụrụ, ihe ndị dị elu na PW1500G nke ọgbọ ọhụrụ PW220G nwere injin turbofan. Na-erite uru na teknụzụ ọgbara ọhụrụ, AXNUMX bụ ụgbọ elu dị jụụ, kacha dị ọcha na nke kacha mma na gburugburu ya.
Na -egosi akara ukwu mkpọtụ 50% belata yana ihe ruru 25% mmanụ ọkụ na -ere n'otu oche ma e jiri ya tụnyere ụgbọ elu ọgbọ gara aga, yana ihe dị ka 50% obere anwụrụ ọkụ NOx karịa ụkpụrụ ụlọ ọrụ, A220 bụ nnukwu ụgbọ elu maka arụmọrụ obodo.
Enyerela ihe karịrị 170 A220s n'aka ndị na -arụ ọrụ iri na Eshia, North America, Europe, na Africa, na -egosi oke ịdịmma nke onye otu ezinụlọ ọhụrụ nke Airbus.
Obodo iri kacha mma maka ndụ abalị ụmụ akwụkwọ n'ụwa